अष्टमी गुरुङको लागि रबि लामिछानेले फेरी यस्तो गरे ! अब के होला ?
Home > Archive: १४ मंसिर २०७४, बिहीबार १६:२९
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १६:२९ (10)
म र भाइ सन्दीप अर्घाखाँची जाँदै थियौँ। बिहान ५ बजेर ३० मिनेट जाँदा कलंकीबाट बस छुट्यो । करिब ३०–३२ यात्रु थियौँ। नौबिसेमा खाजा खायौँ। चालकले राम्ररी नै बस कुदाइरहेका थिए। बिहान ९ बजेतिर फिस्लिङ बजार कटेपछि दुर्...
संसारकै ख्यातिप्राप्त फोन आइफोनको पछिल्लो आइफोन एक्स अर्थात आइफोन टेन नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि भोलीदेखि उपलब्ध हुने भएको छ । नेपालमा एप्पलको आइफोन तथा एप्पलका उत्पादनहरु म्याकबुक्स, आइप्याड, आइम्याकको एक मा...
भारतको बिहारस्थित पटनामा बाख्राको दूध प्रति लिटर एक हजार भारुमा बिक्री भइरहेको छ । डेंगु रोगीलाई त्यसले फाइदा पुग्ने विश्वाससहित बाख्राको दूध खुवाउनेहरु बढेपछि मूल्य आकासिएको हो । पटनाको ...
गाउँगाउँमा अस्पताल बनाउँछौं भन्दै नेताहरु भोट माग्न व्यस्त छन् । तर, जिल्लामै राम्रो अस्पताल भैदिएको भए अर्घाखाँचीकी २७ वर्षीया युवती मनिषा थापा ७ महिने शिशु बोकेर काठमाडौं धाउने थिइनन् । र, उनले त्रिशुली नदीमा...
कुन सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ ? कस्तो सपना अरुलाई सुनाउनु हुदैन ? जानी राखौ सपनाले भविष्यमा हुने वाला राम्रो नराम्रो घटनाको बारेमा पहिला नै जानकारी दिन्छ । तर हामी ती संकेतलाई बुझ्न सक्दैनौं । प्राचीन धर्मग...
हामीले कार्यक्रमको यस अघिको अंकमा निधन भईसकेकी एक युवतीको रहस्यमय भिडियो प्रशारण गरेका थियौँ । आत्महत्या गर्नुअघि आफुलाई कसैले आत्महत्याको अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै बाबु आमाको नाममा क्षमा माग्दै आफ्नै फोनमा भिड...
चुनाव लागे यता जनकपुरमा माछाको व्यापार बढिरहेको छ। साना ठूला पोखरीमा ‘मछुवार’हरू लगातार जाल हानिरहेका छन्। जसरी मछुवारको जालले सागर भनिने जनकपुरका पोखरी तरङ्गित छ, त्यसरी नै मंसिर २१ को चुनावले यहाँको राजनी...